Indlela To Save Money On Qeqesha Iindleko | Gcina A Isitimela
ekhaya > Iingcebiso zokuhamba > Indlela To Save Money On Qeqesha Iindleko
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 11/12/2020)
Bebesuka kumazwe ngamazwe, okanye isixeko ngemizi, ngamava emangalisayo ngokwenene yaye voyaging ngololiwe yenye yeendlela iphumelelayo yokwenza oku. uloliwe European okukhwela ezisekelwe ubukhulu becala umgama ohanjiweyo, kunjalo, Iinkampani ezininzi kaloliwe aseYurophu baye bafudukela inkqubo amaxabiso onamandla - ezifana airfares - apho imali nga ukutshintshatshintsha ngokuxhomekeke kwimfuno, izithintelo, okanye uthenge ngayo ekuseni. Enoba uceba ukuya Austria, Bheljiyam, ulinganiso lweenkcukacha, Fransi , Jemani , okanye e-Itali, kancinane ucwaningo ngaphambi kwakho uhambo ngempela ukuba olule ibhajethi yakho. Apha zi amacebiso eziphezulu on indlela yokonga imali yokuya apho ngololiwe ekuhambeni zakho.
Bhukisha phambi kokuba
Isithuba ekwabelwana ngaso ngoGcina uloliwe (@saveatrain)
ukuba ikhona, Amatikiti kaloliwe ahamba phambili ahamba ngokuthengisa 6 iinyanga ngaphambi kwexesha ehamba. kunjalo, kubhukishelwa nokuba nje ezimbalwa kwiiveki ngaphambi kokuba kunjalo ukukusindisa imali eyaneleyo imali, ngoko musa ukuchitha naliphi na ixesha!
Yiba bhetyebhetye kunye nexesha lonyaka ofuna ukuhamba
Ukuba bhetyebhetye xa ufuna ukuhamba basoloko kungakhokelela kukongiwa ezinkulu. Amaxabiso itikiti Train kuvuka ngethuba kwincopho ngexesha leeholide kwamanye amazwe aseYurophu. Oku uqobo emhlabeni ihlobo iinyanga, ingakumbi ngoJulayi nango-Agasti.
Ukuba ukhetho bahambe ngaphandle kwezi nyanga, amatikiti angabiza kakhulu ukuthenga. kwakhona, amaxesha eeholide anjenge Krisimesi yaye iPasika, Ngamaxesha aphezulu - jonga nini leeholide zesikolo asendleleni kwaye uzame ukuthintela oku.
Rebook itikiti lakho – ulondoloze imali yokuya apho ngololiwe
Ngaba wakha ulihlawulele itikiti uloliwe kuphela ukubona ukuba imali yokukhwela lehla ngokukhawuleza emva kokuba wenze ukuthenga kwakho? Amaxabiso etikiti likaloliwe athanda ukuhla enyuka – rhoqo ngosuku olufanayo. Kuxhomekeka nkqubo ukurhoxiswa zenkampani, kufuneka ngokuqhelekileyo ukwazi ukurhoxisa kwaye kwakhona incwadi ethi uloliwe wakho ngesantya ephantsi ukuba siziphathe 24 iiyure sokuthenga loqobo.
Paris Biarritz Uqeqesha
Lyon ku Biarritz Uqeqesha
Ezinye iinkampani Uloliwe zezilungela ngaphezu abanye ixesha labo ixesha ukurhoxiswa. Kwezinye iimeko, ungatshitshisa itikiti lakho ngaphandle kwe window iiyure ezingama-24. Kubalulekile ukujonga iwebsite yenethiwekhi wakho ukuba ufunde up on nkqubo yayo phambi kokuba kuthengwe olunye itikiti. Qinisekisa ukugcina ndikhangele ukuba amaxabiso amatsha aqeqeshe ze wonge imali rebooking itikiti yakho enenzala ephantsi.
Thatha ithuba ngezaphulelo – Indlela yokonga imali yokuya apho ngololiwe
ezinye imizila kaloliwe European anikele izaphulelo kakhulu ukuba abantwana, abafundi, yaye abakhulileyo abahambi. Abantwana ukususela kwiminyaka emithathu ukuya elinanye ukufumana ngokubanzi ipesenti mgama, ngoxa abantwana abangaphantsi kweminyaka 3 ngesiqhelo ukuhamba simahla. Abafundi kunye nezaphulelo eziphezulu zingafumaneka ngokuxhomekeke koololiwe kunye nendawo oya kuyo oya kuyo. Kubalulekile ukuba umfundi wakho okanye ikhadi omkhulu kuwe maxa onke amaxesha xa uthenga itikiti ngesaphulelo.
Kukho inala okukhwela izaphulelo ezifumanekayo kulo lonke uthungelwano kaloliwe yaseYurophu ezahlukeneyo. Qinisekisa ukuba hlala ndikhangele ukuba izaphulelo ezintsha ngokulandela yethu Facebook yaye Twitter amakhasi.
Ukucinga yokuthatha uloliwe kwisixeko yakho oyithandayo European? Yiya e website yethu saveatrain.com ukuba ukuhlola konke okukhwela zethu kuphela kwaye uqale uceba adventure yakho elandelayo!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-save-money-on-train-fares%2F - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha / es / okanye / de kwiilwimi ezininzi.
Gcina imali train Travel Travelingtips traveltips